Diyo post :: एक खर्ब ३० अर्ब ७४ को परियोजना सुरु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ को परियोजना सुरु - Diyo post
काठमाडौँ, २४ भदौ । धितोपत्र बजारमा यस साता दुई अर्ब ४१ करोड २१ लाख ७९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको ...
साउन ६ । चर्चित क्यामेरा फोन ब्राण्ड ओप्पोले एफथ्री ब्ल्याक एडिशनलाई लिमिटेड एडिशनमा परिणत गर्ने घोषणा गरेको छ । रु. ...
काठमाडौं, २३ असार । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद रामहरि खतिवडाले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउन नहुने बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा ...
आठ करोड ६१ लाख ८० हजारको बजेट विनियोजन
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आव २०७४ /७५ का लागि रु आठ करोड ६१ लाख ८० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ...
कर फछ्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ः पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौँ, १३ असार । पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कर फछ्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक पत्रकार ...
राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाबाट रु २९ लाख बचत
पोखरा, ९ असार । गत वर्षको मङ्सिर २३ देखि पुस ४ गतेसम्म पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाबाट ...
जाजरकोट, ५ असार । जाजरकोट जिल्लामा पोषण संवेदनशील कार्यक्रमका लागि रु ९२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । आव २०७३÷७४ ...
नवलपरासी जिल्लाको कुल रकममध्ये ८०.८ प्रतिशत रकम खर्च
नवलपरासी, २२ जेठ । नवलपरासी जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल बजेटमध्ये ८०दशमलव८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु ...
काठमाडौँ, २१ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी भएको ...